Amagosa aphezulu okhenketho atyelele iJamaica kwindibano ekumgangatho ophezulu ye-UNWTO
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Amagosa aphezulu okhenketho atyelele iJamaica kwindibano ekumgangatho ophezulu ye-UNWTO
Iindaba zeManyano • Iindaba zeBarbados Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Utyalo mali • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba ezahlukeneyo
IJamaica isetelwe intlanganiso ekumgangatho ophezulu ye-UNWTO
UNobhala Jikelele woMbutho wezoKhenketho weZizwe eziManyeneyo (i-UNWTO), uMnu Zurab Pololikashvili, kunye noMphathiswa wezoKhenketho eSaudi Arabia, oHloniphekileyo u-Ahmed Al Khateeb, baphakathi kwamagosa ezokhenketho kwihlabathi lonke azakundwendwela iJamaica kule veki ukuya kwindibano edibeneyo IKhomishini yeNgingqi yaseMelika ye-66 (CAM) ye-UNWTO ngoJuni 24. Olu hambo luza kuphawula utyelelo lokuqala lukaMnu Pololikashvili kwiiCaribbean ezithetha isiNgesi.
Umphathiswa Wezokhenketho wase-Saudi Arabia uzakufika kunye nabathunywa abalishumi elinanye, kubandakanya nomtyali mali
Iintetho zotyalo-mali ziya kuba phezulu kwi-ajenda kunye nabaPhathiswa baseJamaica naseBarbados boKhenketho abamele iCaribbean.
Uthotho lweengxoxo ezinxulumene nokukhuthaza intsebenziswano phakathi kwezokhenketho eJamaica kunye nezokhenketho eSaudi Arabia ziya kwenzeka.
Ukongeza, iiCaribbean ziya kuthi zimelwe ngokuqinileyo njengoMphathiswa Wezokhenketho kunye nezoThutho lwaMazwe ngaMazwe zeBarbados, uSenator, Hon. U-Lisa Cummins, uza kuya eJamaica ukuya kwindibano ye-CAM eza kuchotshelwa ngu-Mphathiswa Wezokhenketho, u-Hon. UEdmund Bartlett. Amagosa ezokhenketho nawo azakuthatha inxaxheba kwiNgxoxo yabaPhathiswa malunga nokuvuselelwa kwecandelo lezokhenketho ukulungiselela ukukhula okubandakanyayo.
UMphathiswa uBartlett ubonakalisa ukuba utyalo-mali luza kuba phezulu kwi-ajenda xa amagosa asekuhlaleni ehlangana noMphathiswa wase-Saudi. Utshilo ukuba uMnu Al Khateeb uzakufika negqiza labalishumi elinanye, kubandakanya nomtyali mali oza kubamba iingxoxo noMphathiswa ngaphandle kwepotifoliyo kwi-Ofisi yoPhuhliso loQoqosho kunye nokuDalwa kwemiSebenzi, iNdlu yeeNgwevu, u-Hon. I-Aubyn Hill, ejikeleze inani lemicimbi kubandakanya amandla ahlaziyekayo.
Ephawula ukubaluleka kolu tyelelo luka-Al Khateeb, Umphathiswa u-Bartlett uthe iyakuba yeyokuqala ngumphathiswa wezokhenketho wase-Saudi Arabia kwaye ubonwa njengomphathiswa ophambili obambe loo portfolio kwingingqi ye-Arabia. Ukwajongana neprojekthi yoLwandle oluBomvu, ekuthiwa lelona phulo likhulu lokhenketho ukuba lenziwe naphina emhlabeni.
Umnumzana Bartlett utyhile ukuba iprojekhthi yoLwandle oluBomvu ibandakanya ukwakha inani leziqithi ukwenza i-US $ 40 yezigidigidi yamava kwezokhenketho eya kuthi ichasane nokuthetha kakhulu malunga nophuhliso lwase-Dubai kwaye kulindeleke ukuba iguqule uqoqosho olusekwe e-Saudi Arabia lube luqhutywa yinto enye. ngokhenketho. Umphathiswa uBartlett uthe oku kubalulekile kwiJamaica njengoko ibalaselisa ixabiso eliphambili lezokhenketho njengesixhobo sotshintsho kuphuhliso lwezoqoqosho.
Umphathiswa wezokhenketho wase-Saudi Arabia uza kutyelela iZiko loKomeleza uKhenketho kunye noLawulo lweNtlekele (i-GTRCMC) kwiDyunivesithi yaseWest Indies, apho azakuthatha inxaxheba kwintlanganiso yamacala amabini kwintsebenziswano yezokhenketho. “Siza kuba nothotho lweengxoxo ezinxulumene nokukhuthaza intsebenziswano phakathi ukhenketho eJamaica kunye nokhenketho eSaudi Arabia, ”utshilo uMphathiswa uBartlett.
Kananjalo, kwi-ajenda yabo kuphononongwa iindawo zokhenketho loluntu kunye nophuhliso lokuhamba ngenqanawa, kunye nozinzo kunye nokomelela “kunye nokwakhiwa kwesibonelelo esibambekayo, sinethemba, kwingingqi ukwenza ukubonga ngokubanzi kukhenketho oluzinzileyo, kunye ukubaluleka kokomelela ekwakheni amandla okubuyela kwimeko yesiqhelo ngenxa yokuphazamiseka okuya kuthi kwenzeke ekugqibeleni, utshilo uMnu Bartlett.
Ngelixa silapha, amagosa ezokhenketho kunye nabathunywa bawo baya kukhenketha iMyuziyam yaseBob Marley, i-GTRCMC kunye neCraighton Estate. UMphathiswa uBartlett uza kubamba isidlo sangokuhlwa esamkela iindwendwe ezikhethekileyo kwi-Devon House, ngelixa u-Nkulumbuso, oHloniphekileyo. UAndrew Holness uya kwandisa imbeko efanayo kwihotele i-AC Marriott.